तामाङ कथानक चलचित्र ‘सेर्कु’ नचल्दै बिबादमा पर्नुको कारण खुल्यो !!! - Staronlinemedia.com
तामाङ कथानक चलचित्र ‘सेर्कु’ नचल्दै बिबादमा पर्नुको कारण खुल्यो !!!
June 18, 2018 | Gyanlama | 4:47 pm
-ज्ञान लामा थोकर तामाङ
यतिखेर सामाजिक संजालमा जताततै तामाङ फिल्म सेर्कुको चर्चा परिचर्चा छ । हुन त यो फिल्म सुटिङ हुनु भन्दा अघि देखि नै चर्चा मै थिए । यो फिल्म चर्चा हुनु नै यस्को शिर्षको कारण हो । यो फिल्मको शिर्षकलाई लिएर विभिन्न टिकका टिप्पणी गरिरहेका छन् । सेर्कुलाई विभिन्न अर्थ लगाएका छ । यो चलचित्रलाई राम्रो मान्ने देखि तामाङ भाषामा सेर्कुको अर्थ नरहेको सम्मको टिप्पणी आएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सबैले आलोचना गर्दै सेर्कुको खास अर्थ के हो त भनेर प्रश्न खडा गरेका छ्न् ।
यति मात्र नभएर तामाङ डाटाबेसमा समेत बहस चलेको देख्न सकिन्छ । तर निर्माण पक्षले सेर्कु गीतको पत्रकार सम्मेलनमा सेर्कुको अर्थ खुलाएको छैन । उक्त प्रश्नमा नायक तथा कथाकार ऋतुराज पाख्रीनले फिल्म हेरे पछि मात्र सेर्कु के हो श्र यसको अर्थ के हो ? आम दर्शकहरुले छर्लङ्ग थाहा हुने कुरा बताएका थिए ।
अहिले नै कथा नखोल्ने सबैलाई गोप्य राख्ने कुरा पाख्रीनले बताएका थिए । पत्रकारको अर्को प्रश्नमा पाख्रीनले सेर्कु फिल्मको कथा लेख्न र खोज अनुसन्धान गर्न करिब दुइ बर्ष लगेको बताएका थिए । त्यसैले त अहिले सेर्कु नेपाली फिल्मि भन्दा पनि चर्का चर्की रुपमा सामाजिक संजालमा यति धेरै भाइरल भएको छ ।
एक त सेर्कु फिल्मको विभिन्न प्रकारको पोष्टरहरुले सबैको मन तानेको छ । त्यो भन्दा पनि अहिले सेर्कु फिल्मको गीतले चर्चा पाइरहेको अबस्थामा फिल्मको संगीत अरु फिल्मसँग मिलेको भनेर निकै नै चर्चा पनि भएको छ । निर्देशक राज कुमार मोक्तानको दोस्रो निर्देशन रहेको सेर्कु एउटा बिशुद्ध तामाङ संस्कारमा आधारित छ भने यसै सेरोफेरोमा केन्द्रीत रहेर निर्माण गरिएको नायक तथा लेखक ऋतुराज पाख्रीन बताउछन् ।
सेर्कु फिल्ममा चाँदनी मोक्तान, ऋतुराज पाख्रीन, सुस्मा मोक्तान, सुस्मा थिङ, उर्मिला वाइबा, बिकास स्याङ्तान, श्याम योन्जन, बैरागी मोक्तान, मुस्कान तामाङ (चन्द्र), योगेश मोक्तान, किरण तामाङ, गोपिराम तामाङ आदि कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ भने नृत्य, छायांकन, सम्पादन रोशन फ्युबाको रहेको छ । कथा, पट्कथा, सम्वद ऋतुराज पाख्रीनको रहेको छ । यस चलचित्रको गीतको संगीत जीवन बोम्जन र राज कुमार मोक्तानले दिएका छन् । अमृत लामा, जितु लोप्चन र आर.बि. लामा सिङदनको स्वर रहेको छ । निर्माताले आगामी भदौ ३० गते राष्ट्रिय नाचघर जमलमा यो फिल्म प्रदर्शन हुने मिति तोकिसकेको छ।